Ogbugbu ụgbọala | Igbu egbugbu
Motorwa moto nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ n'ụwa nile. Agbanyeghị, ọ bụ ihe ọhụụ ịhụ onye yi egbugbu ụgbọala n’elu ahụ ha, ọkachasị mba anyị. Onwere ndi nwere ndu ha na ugbo ala dika ugboala, dika odi ndi ugbo ala, ndi iga njem ma obu ndi oru ugbo.
Ndị a dị njikere oge niile iyi ihe osise nke gwongworo na akpụkpọ ha, ebe ọ bụ ndụ ha. Njikọ ndị a nwere na ụgbọala a anyị kwuburu okwu ha pụrụ iche na pụrụ iche ha na-akwụsịkwa iwere egbugbu n’ahụ ha. N’isiokwu na-esonụ anyị ga-agwa gị banyere ihe niile ịchọrọ ịma gbasara egbugbu ụgbọala.
1 Echiche nke igbu egbugbu ụgbọala
2 Ogbugbu ụgbọala
Echiche nke igbu egbugbu ụgbọala
Na mbu, echiche a banyere igbu egbugbu gwongworo nwere ike buru ihe nzuzu, obu ezie na apuru ighota ya. Onwere ndi mmadu nwere ike ibi ndu site na ugboala ha, ma obu ihe di nkpa nke ndu ha. A na-eji ọtụtụ ụbọchị agba ịnyịnya ma na-arụ ọrụ igwe dị otú ahụ. Na ọdịnala ndị America, ịnụ ụtọ ụgbọ ala bụ ihe a na-ahụkarị na ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ịhụ ndị nwere egbugbu nke nnukwu ụgbọala na akpụkpọ ahụ ha.
Nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara ụfọdụ ndị ji ekpebi igbu egbugbu ụgbọala ma jiri nganga gosi agụụ ha gosipụtara maka klaasị ụgbọ ala a. E wezụga nke ahụ, enwekwara ndị nwere ọ greatụ dị ukwuu maka ụgbọala dị ka ọ dị na ọgba tum tum. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na enwere ndị họọrọ iyi onyinyo nke ụgbọala nke nrọ ha na akpụkpọ ahụ ha.
Ihe eji egbu egbu na-ewu ewu nke kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-agba ụgbọ ala a bụ ndị dị adị. Ọ bụrụ na ọkachamara dị mma na ọrụ ya, nsonaazụ ya dị egwu ebe ọ bụ na ha na-enye mmetụta na ha na-agagharị. Echiche a na-enweta dị mkpa iji nweta mmetụta dị otú ahụ kwesịrị ekwesị. Ihe kachasị mma maka nke a bụ ijide ihu ụgbọala ahụ ma gosipụta ịdị ukwuu nke ụgbọ ala ahụ e kwuru na mbụ.
Mgbe ị na-emeso nnukwu egbugbu, akụkụ kachasị mma nke ahụ maka nke a bụ azụ ma ọ bụ ihu afọ yana mgbatị. Biceps ma ọ bụ mpaghara ogwe aka dị elu bụ ihe ọzọ n'ime akụkụ ahụ eji eme ihe mgbe ọ na-abịa igbu egbugbu ụgbọala. Banyere agbaA na-ejikarị ndị na-ekpo ọkụ ma dị egwu, dị ka ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị iji oji na ọcha na shading iji nweta nsonaazụ dị egwu nke egbugbu ahụ.
Na oge ikpeazu, A na-ewu ewu egbugbu ụgbọala ọhụrụ n'ụlọ akwụkwọ. Ndị a bụ egbugbu nke ihe oyiyi nke ụgbọala na-apụta yana ihe eji eme ihe nke ụwa nke ndị ọkwọ ụgbọ ala. Typesdị ụdị a na-eme ka usoro akara niile yie ihe karịrị otu iji nweta egbugbu dị egwu. Banyere ihe ndị ọzọ eji eme ihe, a na-enwekarị biya ma ọ bụ ihe oyiyi nke gwongworo nwere okpu.
Enwere ndị nwere ekele maka ngwa ọrụ ha nke na ha kpebiri igbu egbugbu na oyiyi na oyiyi nke ụgbọala ha. Ihe nkịtị bụ ịme ihe osise nke ụgbọala ahụ n'onwe ya na nkebi ahịrịokwu ma ọ bụ aha nke ụgbọala ahụ n'onwe ya.
Site ugbu a gaba, onye ọ bụla na-ahọrọ ụdị nke kacha amasị ya na nke kachasị mma na ahụ ya. Ọ bụrụ na ị hụrụ ezi igwe dị n’anya n’anya ma chee na mmekọrịta gị na ha pụrụ iche ma bụrụkwa ọpụrụiche, egbula oge ịnweta ọmarịcha egbugbu mara mma nke na-anọchite anya gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ogbugbu ụgbọala
Akwụkwọ mpịakọta tattoos: a haziri nke kacha ochie
Aka egbugbu zuru ezu, obi abụọ gị niile kpebiri!